I-Pokémon iLanga neNyanga, tshintsha yonke into ngaphandle kokutshintsha nantoni na | Iindaba zeGajethi
Makhe sijonge okutsha kwiNintendo kunye nePokémon, eyona, umdlalo ophathekayo wekhonsoli, hayi esoyikiso ebesizulazula ezitratweni njengeZombies ezingasakhunjulwa mntu, bekubizwa ntoni? Ewe, loo nto, Pokémon Yiya.
Lixesha lokuba uthethe ngePokémon iLanga kunye neNyanga, ukuba ubucinga ukuba uza kukwazi ukulahla lo mxholo, uphume ngethamsanqa. Kwaye ukuba imeko yePokémon ithathe indawo yokutsiba inomdla kakhulu. Bambalwa abathandi be-saga abebekhala ngokuhlaziywa kwenkqubo yomdlalo kunye nemizobo, kwaye INintendo iyayazi indlela yokumamela kwaye kwangaxeshanye ivale indlebe kwiPokémon iLanga neNyanga.
Kungenxa yokuba unika utshintsho olunomdla kumdlalo, uwubeke kumaxesha amatsha ngaxeshanye, ngaphandle kokuchaphazela umdlalo weqonga okanye indlela umdlalo ophuhla ngayo, masinyaniseke, kunzima kakhulu. Kodwa uNintendo wenze ngokungaqhelekanga, ngoku siyayibona iPokémon njengoko singazange sababona ngaphambili, Singatsho ukuba banemizobo emangalisayo, ukuya kuthi ga kwiPokémon, kunjalo. Kunika umdla ukugcina olu tshintsho lubonakalayo, kodwa ukugcina ubunjalo bexesha lonke.
Kulungile, umdlalo ugcina imo yokulwa efanayo, amabali afanayo, uphuhliso olufanayo, kwaye yile nto ihlala isenza ukuba iPokémon inomdla, ukuzibandakanya kwidabi lokujika, ukukwazi ukucinga ngelixa usilwa. Ngale nto kufuneka sibe nembali entsonkothileyo, Olunye uphawu olungalahlekiyo kolu hlelo lwamva nje lomdlalo weNintendo. Nokuba thina sishiye i-Pokémon ngasemva kweminyaka emininzi eyadlulayo, siye samangaliswa yindlela le Nintendo entsha ephuhliswe ngayo apho sizimisele ukubamba wonke umntu. Ngamafutshane, umsebenzi kaNintendo ngePokémon iLanga kunye neNyanga awumangalisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Pokémon iLanga neNyanga, tshintsha yonke into ngaphandle kokutshintsha nantoni na
I-Qualcomm incokola malunga ne-Snapdragon 835 entsha